Munamato waamai vakafa. ? Uye Kunyarara | Ipfupi
Munamato kuna amai vakafa Inogona kutibatsira kuwana nyaradzo yatinoda munguva yakaipa kudaro.
Kushaikirwa naamai nderimwe remarwadzo akasimba anokwanisa kunzwiwa nemunhu nekuti ari kuzviruza kune iye akamupa hupenyu, akamutungamira ndokumuperekedza mukukura kwake. Zvinoshungurudza izvo zvakaoma kukunda, asi nerubatsiro rwemweya urwo munyengetero unoreva, zvinogona kuitika nekukurumidza.
Uyu ndiwo munamato wakakosha uyo, kunyangwe tichifunga kana kuda kusatombochiida, chokwadi ndechekuti hatizive panguva ipi yatinonzwa kuda kuita munamato uyu.
Ndokusaka mukutenda kwecatol, pane mutsara chaiwo uye chaiwo iwo watinogona kutendeukira kune chero mamiriro ezvinhu atiri kupfuura nawo.
1 Munamato kuna amai vakafa uchaitirwa chii?
2 1) Kunamatira amai vapfupi vakafa
3 2) Munamato kuna amai vakafa
4 3) Munamato kuna mai vangu kudenga
4.1 Ndirini pandinogona kunyengetera?
Munamato kuna amai vakafa uchaitirwa chii?
Munamato uyu unogona kuve nezvinangwa zvinoverengeka, chimwe chazvo ndechokukwanisa kuwana pakati pemunamato, nyaradzo yatinoda, chimwe chinangwa uye zvimwe icho chinowana simba rakawandisa ndechokugona kutanga kumwe kutaurirana pamwe neicho chinhanho, izvi zvinotipa chengetedzo yekuti kuve kunge munhu anonaka uye nerudo saamai, ari munzvimbo dzedenga, achizorora murunyararo uye achinakidzwa. nezvezvakanaka zvekuve uine hupenyu hwakanaka pamberi paMwari.
Chimwe chinangwa ndechekukwanisa kutenda rufaro rwekuva naamai uye nekumukumbira zororo risingaperi. Izvi zvakakosha nekuti ndiyo nzira yekunzwa kugadzikana pachedu tichiziva kuti minamato yedu iri kuita kuti nhengo yemhuri yedu iwane chiedza chinopfuura rufu.
1) Kunamatira amai vapfupi vakafa
«Ishe Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, uyo aida kuva naamai pasi pano, Mhandara Maria; tarisa nemeso ane tsitsi pamuranda wako N…, wawakadaidza kubva pachipfuva chemhuri yedu.
Uye kubudikidza nekurevererwa kwaSanta Maria weGuadalupe, ropafadzai rudo rwagara rwuripo kwatiri pasi, uye ita shuwa kuti kubva kudenga irambe ichitibatsira. Tora pasi pekudzivirira kwako netsitsi avo vaakasiya pasi pano. Imi munorarama nekutonga nariini nariini.
Kazhinji, zvirevo zveamai mapfupi akafa ndizvo zvakanaka kwazvo.
Isu parizvino tine akawanda emamato emamato uye, pakati pezvakawanda sarudzo, ndizvo mitsara pfupi iri nyore kubata nemusoro uye chii chaungaite nguva dzese.
Mumamiriro ezvinhu ekusurukirwa, dzimwe nguva, tinoda kunge tiri toga uye tinoshandisa ementos yedu kurangarira mudiwa wedu, munguva idzodzo zvakakosha kuti tikwanise kusimudza mumwe weminamato iyi isingade nguva yakawandisa asi inogona kutibatsira kukunda kusuwa nekuwana rugare nerunyararo izvo zvinongowanikwa nerutivi rwaMwari.
2) Munamato kuna amai vakafa
«Ah amai vangu, ndinoda kutaura izvozvo
Ndiwe waingondifungira uye kuchamhembe kwehupenyu hwangu,
Thanks to you tiri munyika ino,
ndinokutendai imi makatipa zviripo,
ndinokutendai imi makatidzidzisa,
Ndinokutendai imi ndizvo zvatiri,
wakaenda, wakaenda kudenga,
Wakazadzisa chinangwa chako muhupenyu,
wakabatsira muvakidzani nevanoshaya,
gara uchiterera uye uchiziva zvese,
sei kukanganwa zvakawanda zvakanakisa zvinhu, izwi rako, kuseka kwako ...
Nhasi baba vangu, ini ndinokubvunza
nokuzvininipisa kukuru, teererai munyengetero wangu
Teerera inzwi reminyengetero yangu,
dzidzisa mai vangu nzira,
kuti ave padivi pako Ishe,
Mutore azorore muhumambo hwekudenga.
Mai, ruva riri paguva ravo rinosvava
Misodzi pandangariro dzako inoputika
munamato wemweya wako, Mwari vanougamuchira.
Chiedza chisingaperi chinovhenekera iye, ngaazorore murugare.
Wakafarira here iyi minamato yakasimba kuna amai vakafa?
Vanamai zvisikwa zvizere nerekutapira uye nerudo izvo zvinogara zvichitarisisa kugara kwevana vavo. Muenzaniso waamai vane muenzaniso ndiamai vamwe vaIshe wedu Jesu Kristu, vari kuzadzwa neMweya Mutsvene vaiziva kuda uye kugamuchira mwanakomana wavo.
ari Vanamai vanoumba chikamu chakakosha chemuzambiringa wemunhu wese uye kana chikamu ichi naMwari wekusika chikasiya chishava icho chinozadzwa chete kuburikidza nemunamato watinosimudza nepfungwa yekuti iye amene ari padhuze na Mwari achitarisira vana vake.
3) Munamato kuna mai vangu kudenga
«Ah baba vangu, kunyaradza chete munguva dzisingagumi dzekurwadziwa.
Tinochema kushayikwa kwako, amai vanodiwa, munguva ino yekusuwa,
Kurwadziwa kwakanyanya, kutambudzika kwakawanda, unosiya kusuwa kukuru mumoyo yedu,
Mupe iye Ishe, iko kuregererwa kwezvivi zvako, kuti apfuure nemusuwo werufu,
Nakidzwa nechiedza chako uye nerunyararo rusingaperi.
Mwari Wemasimbaose, Isu tinoisa mumaoko ako ane rudo. Kuna amai vedu, avo vakadanwa mune ino hupenyu kuti murege kushamwaridzana. Mupe iye kuzorora kusingaperi kwemweya muparadhiso. Amai vangu, ndinoda kutaura kuti iwe waive mutungamiriri uye kuchamhembe kwesimba rangu,
Thanks to you tiri munyika ino, tinokutendai imi makatipa zviripo,
Tinokutendai imi makatidzidzisa, tinokutendai nemi zvatiri,
Uye nekutenda kwauri ndichagara ndiri munhu akanaka wawakasiya, wakaenda kudenga,
Wakazadzisa chinangwa chako pasi pano, kubatsira vamwe nevanoshaya,
Gara uchiteerera uye uchiziva zvese, sekusateedza zvinhu zvakawanda zvakanaka, izwi rako, kunyemwerera kwako ..
Nhasi baba vangu, ndinokumbira nekuzvininipisa kukuru, inzwai munamato wangu
Teerera inzwi reminamato yangu, ratidza mai vangu nzira,
Kuve padivi pako Tenzi, Mutore azorore muhumambo hwekudenga.
Mai vangu, ruva riri paguva ravo rinosvava, misodzi iri mundangariro dzako inoputika
Munamato wemweya wako, Mwari anohugamuchira. Chiedza chisingaperi ngachivheneke kwauri, dai iwe uzorore murunyararo.
Tinoda munamato uyu zvikuru kuna amai vangu vakafa kudenga.
Amai ishamwari yaunogona kutendeukira chero nguva, kunyangwe uine vana vakaipa sei, vanaamai vanogara vaine mawoko akavhara ekutambira vana vavo.
Vanamai ava pavanosangana kudenga, vanoramba vane rudo uye vanoramba vachida kutiteerera, vanotibatsira uye kuramba vachititungamira.
Mushure mezvose tinogona kunzwisisa kuti hapana nzvimbo iri nani kuna amai pane kuva padyo naIshe mumwechete Mwari baba.
Ndirini pandinogona kunyengetera?
Minamato inogona kuitwa nguva dzese.
Hazvina kudiwa hazvo kuti izwi rikwidzirwe kana kuti makenduru avhenekwe, asi kuti isu tinamate zvichibva pamwoyo uye dai munamato wacho uchibva pachokwadi. Uyezve, zvese zvaunofanira kuve nazvo kutenda kunorarama uye kumuka kuti minamato yedu kusvika kwavanofanira kuenda.
Makenduru, iyo nzvimbo, kana tikazviita nezwi rakaderera, rakakwira izwi kana kuti mupfungwa medu, zviri zvawo zvinhu zvatinoona panguva yacho, asi mune chero zvodini minyengetero inogona kugara ichiitwa nguva dzese.
Namata munamato uyu kuna amai vakafa uye nerudo rwakawanda.